MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Press Release for the 29th ASEAN- Australia Forum
Press Release for the 29th ASEAN- Australia Forum
by adminmofa on 10/03/2017 at 3:58 PM
The 29th ASEAN-Australia Forum
The 29th ASEAN-Australia Forum was held in Nay Pyi Taw on 9-10 March 2017. The Forum was co-chaired by U Myint Thu, Director General, ASEAN Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, and H.E. Mr. Gary Quinlan, Deputy Secretary of the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. Representatives from all ASEAN Member States, Australia, and the ASEAN Secretariat attended the Forum.
At the Forum, participants discussed the developments in the region and the need to have closer collaboration in addressing the shared challenges. Both ASEAN and Australia stressed the importance of ASEAN centrality in the regional architecture.
The Forum further discussed ways to enhance ASEAN-Australia cooperation through the East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), and the ASEAN Defence Ministers Meeting Plus mechanism (ADMM- Plus). They also expressed their willingness to work closely together to counter terrorism and violent extremism in the region, including through the implementation of the renewed ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism and the Senior Officials Meeting on Transnational Crime Consultations with Australia. The Forum also reflected on the success of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) in boosting economic ties between ASEAN and Australia and fostering closer economic integration within ASEAN.
The Forum reviewed the implementation of the ASEAN-Australia Plan of Action (2015-2019) to implement the ASEAN-Australia Strategic Partnership, which was adopted at the ASEAN-Australia Commemorative Summit held in Nay Pyi Taw in 2014.
The Forum also deliberated on the preparations for the ASEAN-Australia Special Summit to be held in Australia in March 2018.
(၂၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်သူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Gary Quinlan တို့မှ ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ် များ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် ဘုံစိန်ခေါ်မှုများအား ဖြေရှင်းရာတွင် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏ အရေးပါမှုများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပြောင်းလဲ နေသည့် ဗိသုကာအဆောက်အဦတွင် အာဆီယံ၏အချက်အချာကျမှုနှင့် အရေးပါမှုကိုထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ၊ အာဆီယံရေကြောင်းဆိုင်ရာတိုးချဲ့ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အပေါင်း အစည်းအဝေး စသည့်ယန္တရားတို့တွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ပူးတွဲကြေညာချက်အသစ်နှင့် အာဆီယံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မှုခင်းများဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ-သြစတြေးလျ အစည်းအဝေးတို့မှ တဆင့် ဒေသတွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစွန်းရောက်မှု တိုက်ဖျက်ရာတွင် အတူတကွပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အာဆီယံနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများမြှင့်တင်ရန်နှင့် အာဆီယံအတွင်း ပိုမိုနီးကပ်သော စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုများရရှိလာစေရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ-နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်မှ ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိမှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ ချမှတ်ခဲ့သည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၅-၂၀၁၉) အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် လာမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ၌ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် စပ်လျဥ်း၍လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်